ထမင်းအိုး: ၀က်သား ဒုတ်ထိုး နဲ့ ကြာဇံကြော်
၀က်သား ဒုတ်ထိုး နဲ့ ကြာဇံကြော် ဒီမှာ တစ်ခါတင်ဖူးပါတယ်။ အဲဒီတုံးကတော့ ကိုယ်တော်ကြီးနဲ့ ၂ ယောက်တည်းလုပ်စားထားတာပါ။ အခု တစ်ခေါက်တော့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ လုပ်စားဖြစ်တာပါ။ သောကြာနေ့က ဘန်ကောက်အုပ်စုနဲ့။ စနေနေ့ကတော့ ဘောလုံး အသင်း ၁ သင်းစာနဲ့ အရန်တွေပါများတဲ့ သူငယ်ချင်းများနဲ့ လုပ်စားဖြစ်တာပါ။ အဲဒီနေ့က (၁၄ ယောက်) ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့လဲ ကျွန်မတို့ကျွေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လာပြန်ပြီနော် အကုန်အကျများတယ်ပြောအုံးမလား။
ဘောလုံး ၁ သင်းကျော်ကျော်ရှိတဲ့အထဲက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မဟေသီချောချောလေးရလို့ ကျွေးဖြစ်တဲ့ပွဲလို့ပြောရမယ်။ ကျွေးတဲ့သူက တစ်ယောက်၊ ၀က်သားတွေ ၀ယ်ခြမ်းတဲ့သူက တစ်ယောက်ပါ။ အိမ်ကအခုမှပြောင်းလို့ ၀က်ကလီစာ မ၀ယ်တတ်သေးတာနဲ့ ညီမလေးတစ်ယောက် အော်ဒါသွားမှာထားပေးတာ။ ဒုတ်ထိုးလုပ်ကြတာကတော့ ၀ယ်ခဲ့တဲ့ ညီမလေးနဲ့ ကျွန်မနဲ့ ၂ ယောက်သား လက်စွမ်းပြလိုက်ကြပါတယ်။ ဒီနေ့လဲ အလှူလက်ဖက်နဲ့ မျက်နှာလုပ်လိုက်တယ်။ အားမနာတမ်း သုံးဆောင်သွားအုံးနော်။
ညီမ မြရွက်ဝေ (ချစ်စရာထမင်းဗူး)ရဲ့ လက်ရာ
၀က်သား ဒုတ်ထိုး စားလို့ရပါပြီ။ ခရင်းလဲ ချထားပေးဘူး။ ဘာနဲ ထိုးစားမလဲနော်။ :D
ပထမ အချဉ် (ဆော့စ်နဲ့ ဆိုင်အတိုင်းလုပ်ထားတာနော်။ ဆရာစားမချန်ပဲ လုပ်ထားတယ်။ တူမတူတော့ သိဘူး)
ဒုတိယ အချဉ် (ကြက်သွန်ဖြူချဉ်)
၀က်သားမစားတဲ့ မောင်လေး နဲ့ ညီမလေးကို ပုဇွန် နဲ့ ကင်းမွန်ထည့်ပြီး ဒီလို တစ်ပန်းကန်စီ ကြော်ပေးတယ်။
ဒါကလဲ ကြာဇံကြော်ပလိန်း (ကြာညို့ နည်းနည်းများသွားတယ်) လူများလို့ ကြာဇံ ၄ ထုပ်ကြော်ရပါတယ်။
ပထမအိုး (မျက်လုံးကောပါတယ်။ တွေ့လားဟင်)
ဒုတိယအိုး (အကြီးကြီးက အစာအိတ်)
၀က်သား ဒုတ်ထိုးအတွက်လိုအပ်သောအရာ ( စနေနေ့က လုပ်စားတဲ့ဟာတွေ ရေးလိုက်ပါတယ်နော်)
အသားတွေ ၊ ကလီစာတွေကို ရေသေချာဆေးပါ။ ပြီးရင် vinegar နည်းနည်း (တအိုးကို ထမင်းစားဇွန် ၅ ဇွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်) စီထည့်ပြီး နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပါ။ နာရီဝက်ကြာပြီးနောက် ဆား ၊ သကြား ၊ စောကောမှုန့်၊ ကြာညို့(ခေါ်)ပဲငံပြာရည်အနှောက် ၊ နာနတ်ပွင့် ၃ ပွင့်ဆီထည့်ပြီး နယ်ပါတယ်။ ပြီးရင် ပြုတ်မယ့်အိုးတည် ၊ ရေထည့်ပြီး နူးနေအောင်တည်လိုက်ပါတယ်။ နူးလာရင်တော့ ၀က်သားဒုတ်ထိုးရပါပြီ။ လွယ်ပါတယ်နော်။ ဒီနေ့တော့ ဒီနည်းနဲ့လုပ်စားလိုက်တယ်။
မှတ်ချက်။ ။ မျက်လုံးက ပေါက်တတ်တယ်နော်။ သတိထားပါ။
အသားတွေ ၊ ကလီစာတွေကို ရေသေချာဆေးပါ။ ပြီးရင် vinegar နည်းနည်း (တအိုးကို ထမင်းစားဇွန် ၅ ဇွန်းလောက်ထည့်လိုက်ပါတယ်) စီထည့်ပြီး နာရီဝက်လောက် နှပ်ထားပါ။ ကြော်မယ့်အိုးတည်ပါ။ ဆီနည်းနည်းထည့်ပါ။ ဆီကျက်လာရင် သကြားထည့်ပါ။ အရောင်လှအောင်လို့ပါ။ မီးဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြော်ပါ။ မီးများလွန်းရင်လဲ သကြားတွေ တအားကြီးမည်းသွားလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် ၀က်သားကိုနီအောင်ကြော်ပါ။ ကလီစာတွေကိုလဲ နီအောင်ကြော်ပါ။ ကြော်ပြီးသား အသားတွေ ၊ ကလီစာတွေကို ဆီစစ်ထားပါ။ ပြီးပြုတ်မယ့်အိုးတည်ပါ။ ကြော်ထားတဲ့ အသား နဲ့ ကလီစာတွေထည့် ၊ ရေထည့် ၊ နာနတ်ပွင့်ထည့် ၊ စောကောမှုန့်လေးထည့်ပြီး နူးနေအောင်တည်ထားပါလေ။ ဒီဝက်သား ဒုတ်ထိုးကတော့ တအားကြီးအရောင်မည်းမနေပါဘူး။ ခပ်ညိုညို ၀ါဝါလေးပါ။ ကြာညို့ထည့်လဲ ရပါတယ်နော်။ ကြိုက်တဲ့ နည်းနဲ့ လုပ်စားနိုင်ပါစေ။
ဒီ ၂ နည်းမျိုးကတော့ ကျွန်မလုပ်တတ်တာတွေပါ။
Labels: ၀က်သားဟင်း, ၀ါးတီး, ဒီလိုလေးတွေလုပ်စားရအောင်
လျှာနဲ့ နှလုံး ရွေးစားသွားပါတယ်နော်း)
မမလဲဒီနေ့ကြာဇံကြော်စားတယ် ညီမလေးရေ.း))
မြန်မာဆိုင်ရောက်မှ ၀ယ်စားရမယ်း-)
မမမိုးကောင်းသူရေ....ညီမလည်း ၀က်သားတုပ်ထိုးအရမ်းကြိုက်တယ်။ ညီမလည်း မမိုးကောင်းသူ လုပ်ထားတာကြည့်ပြီးအရမ်းကိုလုပ်စားချင်ပြီ....ဟူး....မနက်ဖြန်ဘဲ လုပ်စားလိုက်ရင်ကောင်မယ်ထင်တယ်။ လုပ်စားပြီးရင် ပြန်ပြောပြမယ်နော်....မရေကျေးဇူနော်...ပြူလုပ်နည်းပါ သင်ပေးလို့လေ။
ဟိုအချက်၄၀ နဲ့တော့ လုံးကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီ...ညနေပိုင်းမစားဘူးဆိုပိုပြီးစားချင်တယ်။ ဘုရင်လိုပဲစားလိုက်တော့မယ်နော်. ၀ရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးမရေ...အိမ်ထောင်ကျပြီးပြီဆိုတော့ ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူးနော်....ဟီးဟီး
တော်တော်နှိပ်စက်...မစားရဘဲကြည့်နေရတယ်..အိမ်မှာလာစားပါ့မယ် ဆိုတော့ မခေါ်ဘူး
မိုးကောင်းသူက ကိုလူထွေးအိမ်မှာ ရုပ်ရှင်အကြောင်းလာဖတ်ပြီးရင် လင့်ပေးပါလို့ တောင်တယ်...
ကိုလူထွေးကလဲ မှတ်မိသမျှပြန်ရေးတာဆိုတော့ မကူညီနိုင်ဘူး...
တတ်နိုင်တာတခုပဲရှိတယ်... ကိုယ်ဖာသာကိုယ် ဒွေးနေရာမှာ ဝင် သရုပ်ဆောင်ပြီး ပြန်ရိုက်မှပဲ...
(စာကြွင်း... ဝက်သားတုတ်ထိုးက တုတ်တွေလဲ မပါဘူး...)
အားလုံးအကြိုက်တွေချည်းပဲ.. ဟီး... ၀ါးတီးသွားပြီ